Umaki: i-apula | Martech Zone
Lokhu kungenye yezikhala ezidume kakhulu ku- Martech Zone njengoba amabhizinisi nabantu ngabanye bethumela amasu wokuqukethwe kwamavidiyo ukwakha igunya ku-inthanethi nokushayela kuholela ebhizinisini labo. Ngenkathi iMovie ingaba elinye lamapulatifomu athandwa kakhulu wokuhlela amavidiyo ngenxa yokusebenziseka kwawo kalula, ayiyona yezingxenyekazi ezihle kakhulu zokuhlela ividiyo. Futhi, sonke siyazi ukuthi ukurekhoda umsindo kusuka kwikhamera ephathekayo noma kwikhamera yewebhu kuyinto embi
Uma wehle ngomgwaqo wokubhala nokushicilela i-ebook, uyazi ukuthi ukuxubana nezinhlobo zamafayela we-EPUB, ukuguqulwa, ukuklanywa nokusatshalaliswa akuyona eyenhliziyo encane. Kunezixazululo eziningi ze-ebook laphaya ezizokusiza kwinqubo futhi uthole i-ebook yakho ku-Google Play Books, i-Kindle namanye amadivayisi. Ama-ebook ayindlela enhle yokuthi izinkampani zibeke igunya lazo esikhaleni sazo futhi
Izindaba ze-Apple eziqinisa imizamo yenjini yokusesha ziyizindaba ezijabulisayo ngombono wami. Bengihlala nginethemba lokuthi iMicrosoft ingancintisana neGoogle… futhi ngidumele ngokuthi iBing ayikaze ithole umncintiswano obalulekile. Nge-hardware yabo kanye nesiphequluli esishumekiwe, ungacabanga ukuthi bangathola isabelo semakethe esiningi. Anginasiqiniseko sokuthi kungani bengakakwenzi lokho kodwa iGoogle ilawula ngokuphelele imakethe ngo-92.27% wamasheya emakethe… kanti iBing ine-2.83% nje.